UK: Xiisada Brexit iyo Xildhibaano isaga baxay Xisbi Xaakima May • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / UK: Xiisada Brexit iyo Xildhibaano isaga baxay Xisbi Xaakima May
February 21, 2019 - By: Hanad Askar
Sadex xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga Raysalwasaare Theresa May ee Conservative Party ayaa Arbacadii shalay isaga baxay xisbigaasi iyagoo sheegay inay ka gadoodeen qaabka ay Ms.May u maareysay qorshaha ka bixitaanka UK ee EU-da (Brexit).
Xildhibaanadan oo shir jaraa’iid qabtay ayaa sheegay inay kamid yihiin xildhibaano badan oo ka tirsan xisbi Xaakimka oo kasoo horjeeda qorshaha Theresa May, waxayna sheegeen inay macquul tahay in tiro kale oo xildhibaano ah isaga baxaan xisbiga talada haya.
Heidi Allen, Anna Soubry iyo Sarah Wollaston ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan in dalka UK isaga baxo Midowga Yurub arrintaasi oo dhaawici doonta dhaqaalaha wadanka, waxayna sheegeen in marar badan ka codsadeen Ms.May inay qabato afti labaad si loo ogaado halka uu shacabka dalkaasi ka taagan yahay qadiyadan (Brexit).
Go’aanka sadexdan xildhibaan ayaa lagu soo beegay maalin kadib markii ay iyaguna xisbiga Mucaaridka isaga baxeen 7 xildhibaan oo ka gadooday siyaasada hogaamiyaha mucaaridka Jeremy Corbyn.
Xildhibaanadan ka baxay labada xisbi ee ugu weyn UK ayaa sheegay inay si madax banaan ugu sii jiri doonaan Golaha Wakiilada.
Dhamaadka bisha soo socota ee Maarso ayaa ah xiliga loo qabtay in wadanka UK uu ugu danbeyn isaga baxo Midowga Yurub, waxaana weli la gaarin heshiiskii ay labada dhinac ku kala bixi lahaayeen, hadii wadanka UK isaga baxo EU-da iyagoo aan wax heshiis ah wada gaarin ayaa waxa la filayaa inay taasi dhaawac weyn ku keeni doonto ganacsiga dalkaasi oo ka go’i doona suuq-weynaha reer Yurub.